Manchester City oo diiday dalab xoogan ee kaga yimid Bayern Munich si ay kaga hesho Leroy Sané – Gool FM
Manchester City oo diiday dalab xoogan ee kaga yimid Bayern Munich si ay kaga hesho Leroy Sané
(Manchester) 31 Maajo 2019. Manchester City ayaa diiday dalab xiiso badan ee kaga yimid kooxda Bayern Munich si ay ula soo saxiixato xiddiga reer Germany ee Leroy Sané kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga.
Mustaqbalka Leroy Sané ee kooxda Manchester City ayaa ilaa iyo haatan ah midaan fadhinin, maadaama uu xiddiga reer Germany seegay dhowr kulan ee waa weyn xili ciyaareedka dhawaan lasoo xiray.
Bayern Munich ayaa isku dayaysa inay la soo wareegto adeega 23 jirkan reer Germany si ay kaga dhigato badalka labada ciyaaryahan ee Arjen Robben iyo Franck Ribéry, isla markaana ay u xoojiyaan weerarkooda si ay ugu dagaalamaan Champions League xili ciyaareedka xiga.
Hadaba wargeyska “The Guardian” ayaa sheegay in kooxda reer Germany ee Bayern Munich ay miiska u soo saartay Manchester City dalab gaarsiisan 80 milyan eur si ay kaga qaadato saxiixa Leroy Sané, lakiin Skay Blues ay diidey dalabyada ku aadan ciyaaryahanka.
Wargeyska ayaa wuxuu sii sheegay in dalabkan ay iska diiday Manchester City ay ku qasbi doonto madaxda Bayern Munich inay dalab kale u soo bandhigaan kooxda Skay Blues si ay u ogolaadaan heshiiska.
Antonio Conte oo ka hadlay mustaqbalka Icardi iyo imaatinka Lukaku ee kooxda Inter